Sida caag looga sameeyo caano ama Galalith - Ikkaro
Inicio >> Imtixaanka guriga >> Sida caag looga sameeyo caano ama Galalith
Koobka 1 ee caano
4 qaado oo khal
Tallaabo tallaabo tallaabo ah
Hadda waa inaan kululeynaa caanaha laakiin aan u oggolaan inuu karkariyo. Marka kulul waxaan ku shubi doonnaa koob ama baaquli.
Waxaan ku darnaa khalka oo walaaqaya 1 daqiiqo.
Waa la qabtay !! Waxaan ku shubnaa caanaha colander oo waxaan ku haynaa cajiinka sameeyay.
Hadda waxay u hartay oo keliya qaabeynta ama ku rid caaryada oo u daa dhawr maalmood si ay u qaboojiso.
Laakiin raacitaankeedu ma gaaro natiijooyin wanaagsan, ugu yaraan kuwa laga filayo inay u helaan dahabka Coco Chanel.
Imtixaankii ugu horreeyay ee uu sameeyo Galalith
Waxaan tijaabinayay habka loo karinayo Galalith ama caagga caanaha natiijooyinkuna waxoogaa niyad jab ah ayey ahaayeen.
Way cadahay in iyadoo la jaanqaadayo nidaamka oo la garaacayo furaha, ama khiyaanada, waxaan ka heli karnaa qaybo xiiso leh, laakiin xilligan may ahayn sidaas.
Cuntadan ayaa laga faallooday. Waan kululeeyay caanaha ka hor inta aan karkarin waxaan geliyay galaas, waxaan dhigay midabaynta cuntada mararka qaarkood ka dibna khal. Kuuskuusku markiiba way samaysmaan, waxay ka soo baxaan xoqan ka sameysan kiiska 'casein'.
Haddii aan isticmaalno shaandheeye caadi ah, kiin badan ayaa la khasaarinayaa. Way kafiicantahay inaad isticmaasho shaandheeye shiineys ah, mid ka mid ah marada taas oo hayn doonta tiro aad u tiro badan sidoo kalena noo oggolaanaysa inaan si fiican biyaha uga saarno
Midabaynta midabaynta cuntada si fiican ayey u shaqeysaa. Dabcan, ku dhaafida caaryada kuma filna.
Qaybaha aan si fudud ugu shubnay balaastigga waxay noqdeen kuwo jilicsan. Sida kan sawirka ka muuqda.
Dhanka kale, googo'aan aan xoogaa cadaadis ah saaray, natiijooyinka ayaa aad uga fiicnaaday.
Iyo gaar ahaan qaybtaan
Caag adag oo fudud ayaa hadhay. Toddobaad ka dib wali way sii daynaysaa "saliid" laakiin in kasta oo ay weli bixinayso dareen jilicsan, wax baa lagu qaban karaa tayadan.
Gabalkaygii urkii khalka ayaa ku hadhay, suurta galnimada xadgudub, Galalith ayaa loo malaynayaa inuu yahay mid aan ur lahayn
Qodobbada lagu hagaajinayo tijaabooyinka soo socda:
si fiican uga go'doominta biyaha kiishka oo cadaadis ku saaraya qaybaha.
Iskuday inaad isticmaashid liin dhanaan halkii khalka ahayd sida tan looga hadlay La baran karo
isticmaal formaldehyde si aad u dhamayso qaybta oo aad u aragto waxa dhacaya
Casein laguma milmi karo biyaha iyo aashitada, in kasta oo taabashada iyaga ama alkalis ay sababi karto dildilaac. Waa wax ur ah, oo aan la xaddidan karin, aan xasaasiyad lahayn, antistatic, iyo ficil ahaan aan ololi karin (waxay u gubataa si tartiib tartiib ah oo cajiib leh hawada, laakiin waxay ku gubataa iyadoo laga saarayo isha ololka. Waxay ku gubaysaa urka timaha gubanaya).
Galalith somali Wikipedia
Dhagxaanta Caanaha Dhagxaanta
Categories Imtixaanka guriga Tigidhka tigidhka
18 faallooyin ku saabsan "Sida caag looga sameeyo caano ama Galalith"
Noofambar 7, 2010 saacaddu markay ahayd 7:34 pm
Waxba ma fashilmaan, marka lagu daro jabinta, way qudhuntay. Uma muuqato aniga caag wanaagsan aniga, runtii.
Janaayo 2, 2011 markay ahayd 5:35 pm
Waa salaaman tahay wanaag, waxaan doonayay inaan kuu sheego inaan tijaabada sameeyay wali natiijada ma hayo, laakiin markaan helo dib ayaan kuu soo qori doonaa, markan waa inaan kuu sheego in tijaabadani ay ka muuqato buugaag badan oo Ingiriis ah , Isbaanishka waxaan ku helay kaliya boostada halkaan ku taal. Noocyada aan soo arkay, waxay kululeeyaan caanaha (iyagoon karkarin) way wareegayaan, way jiraan kuwa tartiib tartiib ah khal ugu dhigaya midna ka dhigaya, xaqiiqda ayaa ah in caanaha "la gooyey" oo abuuraya buro , kuwani waa Waa inay miiqdaan, LAAKIIN si fiican u isticmaal maro ama shaandho si aad uga saartid inta ugu badan ee dareeraha ah, ku samee qaabka cajiinka (casein) ee ku haray shaandhada (gacanta ama caaryada) oo ku tag meel diiran, Dadka qaarkiis waxay ugu dhaafeen hiitarka, ma aqaano hadii dubida ay shaqeyn doonto @ _ @ Midabada waxaa loo SOO BAXAY in la isticmaalo copper sulfate, sodium hydroxide, iwm (halkan waa doc, laakiin waa ingiriis): http://facstaff.bloomu.edu/mpugh/Experiment%2011.pdf (tarjumaha google?) iyo fiidiyoow laga yaabo inuu cadeeyo uguyaraan: http://www.metacafe.com/watch/310971/how_to_make_plastic_at_home_from_milk/ Waxaan rajeynayaa inaan caawimaad helay, tan iyo markii aan arkay inay jiraan shakiyo badan oo aan ka xumahay haddii aysan sidaas ahayn. Salaan wanaagsan.
January 13, 2011 at 3:02 subaxnimo
Hagaag, waa sidee wax laga xumaado inaad aragto sawirka wadahadalada Galalith oo aadan helin ¬ ¬. Ma aanan u dulqaadan in aan daayo "caaga" la dhigay laba toddobaad, waxaan ka tagay ilaa seddex maalmood, sidoo kale waa lagama maarmaan in la caddeeyo in caaryada aan sameeyay ay aad u dhumuc weynayd (qiyaastii 2cm) markii aan daalay waan dubay heerkulka ugu hooseeya, waqti gaaban iyo carqaladeynta hawsha, sida haddii ay tahay kuleyl dabiici ah ama kan hiitarka, laakiin natiijada ayaa noqotay ... buskud la yaab leh, sida ay tahay, oo ay ku jiraan goobooyin hawo ah oo gudaha ah, ma aysan sameynin u eg caag meel kasta waana wax aad looga xumaado in aysan helin wax xog ah oo si fiican looga faa'iideysto. Waan ka xumahay caawimaadda aan waxtarka lahayn. Salaan
Febraayo 10, 2011 markay ahayd 4:47 pm
June 16, 2011 at 6:15 waxaan ahay
aad u fudud…. Haddii aadan rabin inay jabto, waa inaad miisaamtaa 20kg / cm2 una daa qalalan inta ugu badan ee suurtogalka ah
Sebtember 14, 2011 saacaddu markay ahayd 2:07 am
Ma noo sheegi kartaa Maxaa loo baahan yahay in la dhiso a warshad yar kaararka Galalith?
Waad ogtahay waxyaabaha qaar isaga ku saabsan?
Iyada oo mahadsan,
January 26, 2012 at 2:51 subaxnimo
Waxaan ku sameeyay dhowr nooc oo caano ah mida aniga sida badan iigu shaqeysayna waxay la jirtay caano soy sidoo kale waa inay sugaan 2 maalmood oo nasasho ah
Noofambar 6, 2020 saacaddu markay ahayd 4:03 pm
Mudanayaal: Wixii aad qaban jirteen waxay la mid yihiin sameynta jiis, maadaama kiiska loo yaqaan 'casein' uu yahay qaybta ugu weyn ee jiiska lagu daro dufanka dabiiciga ah ee caanaha, sidaa darteed waa mid la baabi'in karo oo u eg caag Dhamaan waad salaaman tihiin.
Noofambar 12, 2020 markay ahayd 1:46 am
Taasi waa mid foolxun «CHEESE» .Waxaa fiican inaad ku dhigtid rootiga oo aad leedahay nabarro macaan.
1 Tallaabo tallaabo tallaabo ah
2 Imtixaankii ugu horreeyay ee uu sameeyo Galalith
3 Tijaabooyinka mustaqbalka
4 Guryaha kiiska
4.1 Taariikhda Soomaaliya
5 Ilaha iyo tixraacyada